Pyay Oaksoe blog on Netlog
သမီးကို လွှတ်မချလိုက်ပါနဲ�- � အဖေရယ်။
တစ်ညအတွင်း လူတစ်သိန်းကျော်၏ အသက်ကို ၀ါးမျိုခဲ့သော နာဂစ် လေမုန်တိုင်း သည် မြန်မာ့သမိုင်းတွ�- �် အချိန်တိုအတွင်း အသေအပျောက်အများဆ�- �ုးသော သဘာဝဘေး အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်သွားေ�- �ျပြီ။ မုန်တိုင်းပြီးသည�- �နှင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ စေတနာရှင် များက မုန်တိုင်းသင့်ဒေ�- �များသို့ တတ်စွမ်းသရွေ့သွာ�- �ရောက်လှူဒါန်းရင်�- �� လူ့အသက်များကို ကယ် ဆယ်ခဲ့ကြသည်။
ကျွန်တော်သည်လည်း ပုဂ္ဂလိကစေတနာရှင်�- �စ်ဦးအနေဖြင့် မုန်တိုင်းသင့်ဒေ�- �များ သို့ အကြိမ်ကြိမ် သွားရောက်ခဲ့ပါသည�- �။ ထိုကဲ့သို့ အကြိမ်ကြိမ် သွားရောက်သည့် အခါတိုင်း နာဂစ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အနိဋ္ဌာရုံများ၊ ကြေကွဲဖွယ်ရာများ�- � ဒေါသထွက်ဖွယ် ရာများကို မမြင်ရက်သော်လည်း မြင်ခဲ့ရ၊ မကြားရက်သော်လည်း ကြားခဲ့ရသည်။ မော်လမြိုင်ကျွန်�- � ဒုက္ခ သည်စခန်းတစ်ခုတွင�- � ဖခင် လက်ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ကိုင်ထားသော သားအဖနှစ်ဦးကို တွေ့ခဲ့ရသည်။
ဖခင်ရောသမီးဖြစ်သ�- �ပါ တစ်နာရီ မိုင် ၁၂၀နှုန်းနှင့်တို�- �်ခဲ့သော လေပြင်းကြောင့် ခန္ဓာ ကိုယ် အရေပြားများ စုတ်ပြတ်ညိုမည်း မီးလောင်သကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့�- �သည်။ ဖခင် ဖြစ်သူ၏အမည်က ကိုဘဦး၊ အလုပ်အကိုင်က ရေလုပ်သား၊ နာဂစ်မုန်တိုင်းအ�- �ွင်း ဇနီးနှင့် သား ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။�- �ူက မုန်တိုင်း၏ ငရဲညကို ယခုလိုပြောပြခဲ့သ�- �်။
“မုန်တိုင်းလာမယ်�- �ိုတာကို ရေဒီယိုကလဲ ကြားတယ်။ ကျွန်တော်တို့အတွ�- �်ကတော့ မုန်တိုင်းဆိုတာ မဆန်းပါဘူး။ မုန်တိုင်း ကျမယ်ဆိုတာသိပေမယ�- �့ တွေ့နေကျလို့ပဲ ထင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနေ့က ပင်လယ်ထဲကိုတော့ မထွက်ဘူးပေါ့။ မွန်းလွဲ နှစ်နာရီလောက်မှာ�- �ရွှီ ရွှီမြည်သံနဲ့ လေပြင်းစတိုက်သံက�- �ု ကြားရတယ်။ ခဏအတွင်းမှာပဲ ကျွန်တော်တို့မိသ�- �းစုလည်း ယိမ်းယိုင် နေတဲ့အိမ်ပေါ်က ဆင်းခဲ့ ရတယ်။ ခြံထဲက အုန်းပင်တွေဆီကို ပြေးဖက်ထားရတယ်။ မျက်စိ အောက်မှာတင် ကျွန်တော်တို့အိမ�- �ကလေးက လေထဲကို တစ်စစီပါ သွားတယ်။ တစ်ပြိုင်တည်း မှာပဲ ရေက တရိပ်ရိပ်တက်လာတယ�- �။ ဒါနဲ့ အငယ်ဆုံးနှစ်နှစ်�- �ားကလေးကို လည်ပင်းပေါ်မှာ ခွထိုင်ခိုင်း၊ ခြောက်နှစ်သမီးကြ�- �းနဲ့ ငါးနှစ်သားလတ်ကို အုန်းပင်ပေါ်တွန်း�- �င်ပြီး ဖက်ထားခိုင်းရ တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တု�- �င် အုန်းပင်ပေါ် တက်ပြီး ခုနကလေးနှစ်ယောက်�- �ို ဖက် ထားတယ်။ အဲဒီအချိန်က ကျွန်တော့်မိန်းမ ဘယ်ရောက်သွားမှန်�- �လဲ မသိလိုက်တော့ဘူး။ အချိန် ကလည်း မှောင်လာတယ်။ အမှောင်ထဲမှာ ကယ်ကြပါဆိုတဲ့ အသံတွေ၊ အဖေရေ၊ အမေ ရေ အသံတွေ ကြားနေရတယ်။ ရေကလဲ တက် လာလိုက်တာ အုန်းပင်ပေါ်က ကျွန်တော့်ခါးဆီ အထိ ရောက်လာတယ်။ သစ်ပင်ကိုဖက်ထားတ�- � နှစ်နာရီလောက်ကြာ�- �တာ့ လက်အံ သေလာ တယ်။ လည်ပင်းပေါ်က အငယ်ဆုံးသားလေးက ကြောက်ကြောက်နှင်�- �ဖက်ထားတော့ လည် ပင်း အစ်ပြီး အသက်ရှူလည်းကျပ် လာတယ်။ ၀တ်ထားတဲ့အ၀တ်လည်�- � မုန်တိုင်းကြောင်�- � စုတ် ပြတ်သတ်ကုန်ပြီ။ မျက်လုံးတွေလဲ ဖွင့်လို့မရတော့ဘ�- �း။
ကျွန်တော် လက်အံသေလို့ ပြုတ်ကျရင် မိသားစုလေးယောက်လ�- �ုး သေရ တော့မယ်။ လည်ပင်းအပေါ်က အငယ် လေးက အတင်းဖက်ထားတော့ အသက်ရှူလည်း မ၀ တော့ဘူး။ ဒါနဲ့ခေါင်းကိုခါ�- �ပီး အသက်ရှူလိုက်ချိန�- �မှာ ကျွန်တော့်လည်ပင်�- �ပေါ်မှာ ထိုင်တဲ့သား လေးက ရေထဲကို ပြုတ်ကျသွား တယ်။ သွားနှင့်တော့ သားလေးရယ်။ မကြာခင် အဖေတို့လဲ မင်းနောက်ကို လိုက်ရတော့မှာပါလ�- �ု့ နာနာကြည်းကြည်း အော်လိုက်မိတယ်။ အခုတော့ ကျွန် တော်ရယ်၊ သားရယ်၊ သမီးကြီးရယ်ပဲ ကျန်တော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ နောက်ထပ် နှစ်နာရီလောက် ကြာပြန်တော့ ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှ ဆက်ပြီးမတောင့်ထာ�- �နိုင်တော့ဘူး။ စိတ်တစ်ချက် လျှော့ လိုက်တဲ့အခါ ညာဘက်လက်မှာ ဖက် ထားတဲ့ သားလတ် ရေထဲကို ပြုတ်ကျသွားပြန်တ�- �်။ အဖေလို့ စူးစူးရှရှ အော်လိုက်တဲ့အသံက�- �ု ရေလှိုင်းကဖုံးသွာ�- �တယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ သမီးနှစ် ယောက်တို့ပဲ ကျန်တော့တယ်။ သမီးကြီး က သူ့မောင်လေးနှစ်ေ�- �ာက်ကို ကျွန်တော်က ရေထဲ ကို လွှတ်ချလိုက်တာ ထင်ပုံရတယ်။ သမီးကို လွှတ်မချလိုက်ပါနဲ�- � အဖေရယ်လို့ အော်ရင်းငိုနေ တယ်။ ကျွန်တော့်အသည်းေ�- �ွ ပေါက်ထွက် မတတ် ခံစားရတယ်။ ကျွန်တော့်သားတွေ�- �ို ကျွန်တော် ရေထဲပစ်ချမလားဗျာ�- � ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် သွေးရူးသွေးတန်းန�- �့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ သမီးကို ဘယ်တော့မှ အဖေလွှတ်မချဘူး။ သမီးရဲ့ မောင်လေးနှစ်ယောက�- �ကိုလဲ အဖေ လွှတ်ချ ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးလို့ပြော�- �င်း ကျွန်တော် ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုချလိုက်မိတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သားအဖ နှစ်ယောက် အုန်းပင်ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဖက်ထား ရင်း ရေကတဖြည်း ဖြည်းကျသွားတယ်။ မနက်လင်းတော့ အုန်းပင်တွေကြားမ�- �ာ သေနေတဲ့ ကျွန်တော့်သားလေး�- �ှစ်ယောက်အလောင်း နဲ့ အုန်းပင်ပိပြီး သေနေတဲ့ ကျွန်တော့်မိန်းမ�- �လောင်း ကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ သားနှစ်ယောက် အလောင်းကို ကျွန်တော်ဖက်ပြီး ဘယ်လောက်ကြာအောင် ငိုနေမိလဲ မသိတော့ဘူး။ အသက် မသေတဲ့ တခြားရွာသားတွေလာ�- �ပီး ကျွန်တော့်ကို ဖျောင်းဖျ၊ ကျွန်တော့်လက်ထဲက ကလေး အလောင်းတွေကို ယူသွားတာပဲ မှတ်မိပါတော့တယ်ဗ�- �ာ”ဟု ပြောပြသည်။
ဖခင်လက်ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆ�- �ပ်ရင်း မျက်ရည်တွင်တွင်က�- �နေသော သမီး ဖြစ်သူအား ကျွန်တော်က ‘သမီး ဘာလို့ငိုနေတာလဲ၊ ဆာလို့လား၊ ရော့- ဦးဦးဆီကမုန့်တေ�- �ကို စား’ဟု ပေးသော်လည်း မယူပါ။ ဆာလို့မဟုတ်ဘူး၊ မောင်လေးတွေကို သတိရလို့ပါဟုပြော ရင်း ငိုနေရှာသည်။ သူတို့သားအဖကိုကြ�- �့်ရင်း ကျွန်တော် မျက်ရည်ကျမိသည်။ သူတို့၏စိတ် ဒဏ်ရာမှာ ဘယ်အချိန်တွင်မှ ပျောက်ကင်းမှာလဲဟ�- � ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးမိသော် လည်း အဖြေကမရှိ။ စေတနာရှင်၊ မေတ္တာရှင်၊ ကရုဏာရှင်များ၏ ကူညီဖေးမမှု များက သူတို့အတွက် လိုနေသည်ကတော့ အမှန်ပင်။
(YMG မှ ပြန်လည်ဖေါ်ပြပါသည�- �)။
ရှေးဦးစွာကျွနု�- �်ကြောင်း ဖော်ပြလိုပါတယ် ကျွန်တော်မိဘများ�- �ည် သာမာန်တောင်သူလယ်�- �မားများဖြစ်ပါတယ်
ငွေတွေဖောဖောသီသီ�- �ုံးနေသူတွေမဟုတ်ပ�- �� ကျွန်တော်ဆယ်တန်း�- �အာင်တော့ဆေးကျောင�- ��းမှီပါတယ်
မှီတဲ့အတိုင်းပဲ ကျောင်းသွားအပ်ပါ�- �ယ် ပြသနာက အဲဒီကစတာဗျ ကုန်လိုက်တာမှသော�- �်သောက်လဲ ဗျာ
ငွေတွေတစ်သိန်းလေ�- �က်ကုန်တယ်ဗျာ ကဲဟုတ်ပြီကုန်တာက�- �ားဦး
ကျောင်းတစ်ပတ်ပတ်�- �ကည့်လိုက်တော့ ငါးမိနစ်တောင်မကြ�- �ဘူး ကျောင်းကတစ်ပတ်ပြ�- �့်သွားတယ်
အလွန်ဆုံးရှိလှနှ�- �်အေကပေါ့ဗျာ ကဲဟုတ်ပြီကျောင်း�- �ကျဉ်းတယ်ထားဦး
အားကစားလုပ်ဖို့ရ�- � ဘာမှမရှိဘူးလက်ဖက�- �ရည်ဆိုင်ကပင်ပေါင�- ��ခုံတစ်ခုံပဲရှိတယ-်
သူများကျောင်းတွေ�- �ှာအစုံရှိတယ် ကိုယ်တွေလောက်လဲပ�- �ုက်ဆံမကုန်ဘူး
ကျောင်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အကြီးအကဲမျ�- �းရှက်တတ်ရင်လဲသေဖ�- ��ု့ကောင်းတယ်
ပြီးတော့အဆောင်ကိ�- �္စနယ်ကကျောင်းသားေ�- ��ွဘယ်လောက်ဒုက္ခရော- က်တယ်မှတ်လဲ
ပိုက်ဆံမရှိတဲ့ကေ�- �ာင်းသားတွေဆိုပို�- ��တာင်ဆိုဦးမယ် အခု ကကျွန်တော်တို့ဆေ�- �ကျောင်းကပိုက်ဆံမ�- ��ှိရင်မတတ်ရတော့ဘူ-းလိုဖြစ်နေတယ်
ကျောင်းပတ်ဝန်းကျ�- �်မှာအဆောင်အလွတ်ေ�- ��ွအများကြီးပါဗျာ လူမနေလို့
ပျက်တောင်ဆီးနေေ�- �းတယ် ခင်ဗျားတို့ကပြော�- �ယ်ငါတို့မပေးတာမဟ�- ��တ်ဘူးအထက်ကမပေးခိ-ုင်းလို့တဲ့
ကဲဟုတ်ပြီအထက်ကမေ�- �းဘူး ပဲထားပါဦး ခင်ဗျားတို့တောင်�- �ဆိုရမှာပေါ့ ခင်ဗျားတို့ကပြော�- �ီးမယ်တိုးတိုး
တိတ်တိတ်အမြဲကြိုးစားနေတယ်လို့ ခင်ဗျားတို့လူသိရ�- �င်ကြားမတောင်းသရေ�- ��့ဘယ်တော့မှပေးမှမ- ဟုတ်ဘူး
ခင်ဗျားတို့ကိုယ်�- �ိုင်ပြောင်းလဲနေတ�- ��်လို့ယုံကြည်နေတဲ-့  စနစ်ကြီးပဲလေ
ပြီးတော့ ကျောင်းအပ်တဲ့လှေ�- �ာက်လွှာမှာ ဘယ်နိုင်ငံရေးအဖွ�- �့အစည်းနဲ့မှဆက်နွ�- ��်မှုမရှိရဘူတဲ့
ဒါဆို နိုင်ငံရေးသမားတစ�- �ဦးဟာ ကျောင်းသားမဖြစ်န�- �ိင်တော့ဘူးလား ကဲ
ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ကို မျက်စိပိတ်ထားတာပ�- � ဆဲဗင်း ဇူလိုင်တုန်းကလဲေ�- �ျာင်းကို
ထမိန်နဲ့ကျောက်ပြ�- �်ပို့ ခံရပြီးပြီ ဒါဟာကျောင်းသားတေ�- �ရဲ့အမှားမဟုတ်ဘူး
သူများတွေအမြင်မှ�- �ဆေးကျောင်းသားတွေ�- ��ာသတ္တမရှိတဲ့လူတွေ- စာပဲသိပြီး
ဘာမှမသိတဲ့သူတွေလ�- �ု့ ဟုတ်လည်းဟုတ်တာပဲ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသ�- �းတစ်ယောက်ဟာ
အရာရာကိုနှံ့စပ်သ�- �မြင်နေရမယ် ကဲလေထားပါတော့ ရေးချင်တိုင်းရေး�- �ို့ရှိရင်ကုန်မှာ�- ��တာင်မဟုတ်ဘူး
ကျွုန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီအခက�- �အခဲတွေကို ပါချုပ်ကြီးနဲ့တကွသက်�- �ိုင်သူတွေအားလုံး�- ��ဖြရျင်းပေးစေ
အားလုံးသိကြတဲ့အတ�- �ုင်းပါပဲဗျာ IAEA က အီရန်မှာ နျူလက်နက်ထုတ်တော�- �မယ်လို့ကြေငြာလို�- ��က်ပါပြီဗျာ
အစ္စရေးကလည်းတိုက်�- �ယ်တကဲကဲလုပ်နေပြါ�- ��ီ အီရန်ကလည်းလေလုံး�- �ွားထွားနဲ့ ရန်စကားပြောနေကြ
ပြီပေါ့ဗျာ အမေရိကန်ကတော့စီး�- �ွားပျက်ကပ်ထဲကလည်�- �� ထွက်လာတာမကြာသေးေ�- �ာ့
အချိန်တွေဆွဲနေတာ�- �ပါ့ဗျာ ရွေးကောက်ပွဲကလည်�- �နီးလာပြီကိုး
အမေရိကန်မှာအဓိကအ�- �ပ်စုကြီးနှစ်စုရှ�- ��တယ်ဗျ တစ်ခုက ဒီမိုကရက်နဲ့နောက�- �တစ်ခုက ရီပတ်ဘလစ်ကန်တွေေ�- �ါ့
လက်ရှိအိုဘားမားက ဒီမိုကရက်ကပါ ဒီမိုကရက်မှာတော့ ပညာတတ်လူငယ်အသိုင�- �းအ၀ိုင်းကထောက်ခံ�- ��ားတယ်
ရီပတ်ဘလစ်ကန်ကတော�- � ရှေးရိုးစွဲဝါဒီေ�- �ွ လူမျိုကြီးဝါဒတွေ ဇီယွန်ဝါဒတွေ အစ္စရေးကိုထောက်ခံ�- �ူတွေပါပါတယ်
ဗျ အစ္စရေးအနေနဲ့လုပ်�- �ိုင်တာကတော့ ရီပတ်ဘလစ်တွေနေရာ�- �ျားများရအောင်လုပ�- ��ပေးဖို့ပါပဲ
အမေရိကန်မထောက်ခံ�- �ဲနဲ့ဝင်တိုက်ရင်ေ�- ��ာ့ အစ္စရေးရဲ့အဓိကမဟာ�- �ိတ် အမေရိကန်က နောင်မကူညီတော့ဘူ�- �
ရီပတ်ဘလစ်တွေကလည်�- � အီရန်ကိုတိုက်ကို�- �ိုက်ရမယ်လို့ကြွေ�- ��ကြော်နေကြပြီ
အစ္စရေးကတော့အီရန်�- �ျူအရေးဆက်လုပ်နေသ�- ��ရွ့တိုက်မှာမြေကြ-ီးလက်ခတ်မလွဲပါဘူ�- �
အီရန်ကလည်းနျူလက်�- �က်ပိုင်ဆိုင်ထားမ�- ��သာ အနောက်နိုင်ငံတွေ�- �ကီးစိုးတာကို တုံ့ပြန်နိုင်မှာ�- �ိုး
ဒေသတွင်းမှာလည်း လူတွင်ကျယ်ဖြစ်မှ�- �ကိုးဗျ
တစ်ခုပြောချင်တာက တခြားနိုင်ငံတွေ ဥပမာ အစ္စရေးတို့အမေရိက�- �်တို့ပေါ့ဗျာ သူတို့မှာနျူလက်�- �က်တွေ
ထောင်သောင်းချီရှ�- �တယ် ဘာလို့တစ်ခြားနို�- �်ငံတွေက ဘာမှဝင်မစွက်ဖက်လ�- �်း
အဓိက ကသဘေားထားတည်ငြိမ�- �တယ်ဗျ တစ်ခုခုဖြစ်လာရင်�- �ျူသုံးပြီးတော့မြ�- ��ိမ်းခြောက်ဘူး
အီရန်မှာအလွန် အပြောင်းအလဲမြန်တ�- �့ ဘာသာရေးခေါင်းဆော�- �်ကြီးတွေ အစိုးရလူကြီးတွေ
ရှိနေတယ်ဗျ အဲဒါ အဓိက ပေါ့ဗျာ နောက်တစ်ခုကတာလီဘ�- �်တွေ အယ်ကိုင်ဒါတွေကလည�- �းပေါမှပေါ
သူတို့လက်ထဲနျူလက�- �နက်ရသွားရင် တစ်ကမ္ဘာလုံးအရေြး�- �စ်လာပြီလေ
အစ္စရေးကတော့အဓိကပ�- �်မှတ်ပေါ့ဗျာ အီရန်အစိုးရကိုယ်�- �ိုင် ကမ္ဘာ့မြေပုံပေါ်ကဖျေ�- �က်ပစ်မယ်လို့
ကြိမ်းထားတာကိုး အဲဒါကြောင့်ပေါ့အ�- �္စရေးကတော့ဘယ်အထိခ�- ��မလဲ
အခုဆိုရင်တော့ အစ္စရေးကို ဘန်ကာဖျက်ဘုံး အကြီးစားကြီးတွေအ�- �မရိကန်ကပေးပို့နေ�- ��ပီ
အီရတ်ကသူ့လူတွေကိ�- �လည်းပြန်ရုတ်သိမ်�- ��ပြီးပြီဆိုတော့ အချိန်တစ်ခုအတွင်�- �မှာဘဲ
http:// ww.zwani.com/ ပုံလှလှလေးတွေ လိုချင်ရင်
http://: http://myanmaritpros.com/ ကွန်ပျူတာ အမေးအဖြေများလေ့လ- ရန်....
ww.thelist.com/countrycode.html#top နိုင်ငံများရဲ့ ကုတ်ကို သိချင်ရင်....
http:// ww.deathclock.com/index.cfm ကိုယ်ဘယ်နေ့သေမလဲ သိချင်ကြပါသလား....
http:// https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=6af78.... ကွန်ပြူတာအတွက် နောက်ခံ ကိုယ့်ပုံနဲ့ မြင်ကွင်း...
http:// ww.myanmarisp.com/computer_ict ကွန်ပြူတာ နဲ့ သတင်း နည်းပညာ..
ww.imagechef.com/ ကိုယ့်ပုံလေးတွေန-့  Logo / Icon လေးတွေလုပ်ချင်ရင- ..
ww.topsecretemail.com/Encode_Message.cfm Email တွေကို လုံခြုံအောင် ပို့ကြမယ်..
ww.passwordmeter.com/ သင်သုံးနေတဲ့ Password လုံခြုံမှု ရှိရဲ့လား..စစ်ချင်- - ရင်...
ww.photoshoptalent.com Photoshop လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေ..
http://delicious.com/ ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံ- website..တွေကို ရှာရန်..
ww.mmphotoshop.net Photoshop ကိုမြန်မာလိုလေ့လာဖ-ု့...
ww.whatismyipaddress.com Gtalk မှ နိုင်ငံ လိမ်ပြောသူများကိ- ဖမ်းဖို့...
ww.4shared.com/file/80626166/b5161ee5/GTunnel.html- - ?cau2=403tNu... GTunnel.exe ကိုလိုချင်ရင်....
ww.yousendit.com/ ဖိုင်တွဲကြီးကြီး- တွ ပို့ချင်ရင်...(၁)
ww.sendthisfile.com/ ဖိုင်တွဲကြီးကြီး- တွ ပို့ချင်ရင်...(၂)
ww.send6.com ဖိုင်တွဲကြီးကြီး- တွ ပို့ချင်ရင်...(၃)
ww.drhardware.com/ Hardware ကိုစစ်တဲ့ software ..(၁)
ww.lavalys.com/ Hardware ကိုစစ်တဲ့ software...(၂)
ww.spadixbd.com/ Hardware ကိုစစ်တဲ့ software ....(၃)
ww.alpha.com.mm/alphaprice/alphaprice.php ကွန်ပျူတာ ဈေးနှုန်းတွက်ချင- ရင်...
ww.memtest86.com/ Memory ကိုစစ်ဖို့ software......
inkkk.com/glitters14_comments_Hearts_&_Love.html ချစ်သူအတွက် ပုံလှလှလေးတွေ ယူရန်
ww.heidi.ie/ Windows ကို မထိစေပဲ ဖိုင်တွေကို ဖျက်တဲ့ software........
ww.download.com/ThreatFire-AntiVirus-Free-Edition/- - 3000-2239... နဲ့ Virus ကိုရှင်းတဲ့ software.....
ww.gadwin.com/printscreen/Print Screen ဖမ်းတဲ့ Software...
ww.optimizingpc.com/index.html Software တွေ အစုံဆုံးနေရာ...
ww.abstradrome.com/ Hard Disk ကိုသွေးသစ်လောင်း-ဲ့ software..
ww.runtime.org/data-recovery-downloads.htm Hard Disk အတွက် Recover လုပ်တဲ့ software....
ww.softpedia.com/get/System/Hard-Disk-Utils/Partit- - ion-Magic.sh... Hard Disk ကို Partition ချတဲ့ software...
ww.heidi.ie/Window ကို မပါစေပဲ Hard Disk ကိုဖျက်တဲ့ software...
ww.customizetalk.com/ Gtalk အကြောင်းစုံစုံ သိချင်ရင်...
http:// ww.vintelligence.blogspot.com/ Java အကြောင်းသိလိုသမှ- ..
http:// ww.pcworld.com/ ကွန်ပျူတာ အကြောင်း ဘာထူးလဲ..(PC World)..
http:// http:// ww.ebooksbank.com/ E-Books တွေကူးဖိူ့...
http:// ww.mediaringtalk.com ဖုန်းအလကားပြောရဖ-ု့နေရာ......
http:// ww.w3schools.com/ ပရိုဂမ်သမားတွေအတ- က်....
ww.brothersoft.com/ Software တွေ ကူးမယ်ဆိုရင်...
ww.flashvortex.com/index.php စိတ်ဝင်စားစရာ စာလုံးလေးတွေ...
http:// ww.books-hive.com မြန်မာ E-books တွေ....
http:// http:// www.myanmarengineer.org အင်ဂျင်နီယာဆိုင်-ာနဲ့ ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ နည်းပညာတွေ ဆွေးနွေးဖြန့်ဝေေ-းနေတဲ့ နေရာ..
http:// ww.adobetutorialz.com Adobe ရဲ့ Photoshop နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ tool တွေလေ့လာစရာ
http:// ww.reader.google.com Google reader တဲ့ဟေ့... အသုံးပြုနည်းကိုေ-ာ့ Blog နံပါတ် 46 မှာရေးထားပါတယ်..
http://free.avg.com/download-avg-anti-virus-fr.... AVG Antivirus Download အလကားရတဲ့နေရာ....
ww.insideoe.com/resources/ Outlook Express ကိုပြင်တဲ့နေရာ...
ww.webroot.com/En_US/index.html Webroot Antivirus & Spyware Software ယူဖို့နေရာ..
ww.mymyanmar.net/2g/ မြန်မာယူနီကုတ် အကြောင်းလေ့လာဖို- ..
ww.softpedia.com/get/internet/E-mail/Mail/Utilitie- - s/Gmail-Mana... Gmail Manager လုပ်တဲ့ Software..(၁)
ww.longfocus.com/firefox/ Gmail Manager လုပ်တဲ့ Software ....(၂)
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/browse...- Download Management လုပ်တဲ့ Software..
ww.imtoo.com/dvd-ripper-platinum.html DVD ထဲက သီချင်းတွေကို ဖြတ်တဲ့တောက်တဲ့ Software..(1)
ww.computeractive.co.uk/downloads/backup-and-recov- - ery ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာမ- မှားဖျက်မိသော ပုံများကို ပြန်ရှာပေးသော Software..(၁)
ww.objectrescue.com/download/ ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာမ- မှားဖျက်မိသော ပုံများကို ပြန်ရှာပေးသော Software..(၂)
ww.xilisoft.com/ DVD ဖြတ်တဲ့ Software...
ww.mp4converter.net/download.html?ID=1 MP4 လုပ်တဲ့ Software တွေ...
ww.dbpoweramp.com/ WAV မှ MP3 ပြောင်းပေးတဲ့ Software..
ww.miksoft.net/comments.htm Video ဖိုင်တွေဖွင့်တဲ့ Software...
ww.cucusoft.com/ DVD ကူးတဲ့ Software တွေ..
ww.infinadyne.com/flashretriever.html Memory Card ထဲမှ ပုံတွေ ၊ ဗီဒီယိုတွေ ၊ သီချင်းတွေ မှားဖျက်မိရင် ပြန်ယူပေးတဲ့ Software..
ww.wnsoft.com/ ပုံတွေကို Album အလိုက်ပို့လို့ရတ-့  Software...
ww.freedownloadscenter.com/Search/internet_cleaner- - .html Internet သုံးထားတဲ့အတွက် မလိုတဲ့ ဖိုင်တွေကိုဖျက်တ-့  Software...
ww.powerkaraoke.com/src/prod_karaokecdgcreatorpro.- - php ကာရာအိုကေ ဆိုလို့ရတဲ့ Software...
ww.lostpassword.com/ Password တွေကို ရှာပေးတဲ့ Software..
ww.pcdocpro.com/ PC ထဲက အမှားတွေကို ပြတဲ့ Software ...
ww.acronis.com.sg/ Partition ချတဲ့ Software...(၁)
ww.partitionmanager.com/ Partition ချတဲ့ Software....(၂)
ww.soft32.com/download_151.html Partition ချတဲ့ Software....(၃)...(ကျွန်တော်- အကြိုက်ဆုံး Software..ပေါ့.)
ww.styopkin.com/ ပုံတွေကို အမည်လွယ်လွယ်ပေးတ-့  Software...(၁)
ww.fastphotorenamer.com/ ပုံတွေကို အမည်လွယ်လွယ်ပြော-်းပေးတဲ့ Software...(၂)
ww.infinadyne.com/download.shtml CD/DVD ကောင်းမကောင်း စမ်းတဲ့ Software....
ww.download3000.com/download_27264.html ဘယ်ရောက်နေမှန်းမ-ိတဲ့ ဖိုင် ကိုရှာတဲ့ Software...
ww.manageengine.com/products/desktop-central/softw- - are-hardware... Windows Product Key ကိုရှာတဲ့ Software...
ww.messx.net/download.php English - Myanmar အဘိဓာန် Software...(ဖုန်း ၊ PC တွေအတွက်ပါ ရတယ်..ဟဲဟဲ ပိုက်ဆံတော့ ဆောင်ထားပေါ့..)
ww.burmese-dictionary.org/ Myanmar-English-Myanmar Online အဘိဓာန်...(၂)
ww.ayinepan.com/literature/dictionary/ English - Myanmar အဘိဓာန်စာအုပ်....
ww.monywa.org/fonts/index.htm English - Myanmar ဖောင့်များ.....
ww.mtvmusic.com/ MTV MUSIC တွေလိုချင်ရင်...
ww.keronsoft.com/ ပုံတွေအများကြီးက-ုတစ်ခါတည်း နာမည်ပြောင်းတဲ့ Software...
ww.acutesystems.com/ Mac မှ Window သို့ ဖိုင်ပြောင်းပေးတ-့  Software....
ww.spadixbd.com/ Program တွေ PC ထဲမှာ နေရာယူတာကို ကြည့်တဲ့ Software...
ww.axialis.com/download/iw.html Icon လုပ်တဲ့ Software...
ww.softfields.com/ ပုံတွေကို တပြိုင်နက်ကြည့်တ-့  Software.....
ww.lavasoft.de/ Adware ကိုရှင်းပေးတဲ့ Software...
ww.irfanview.com/ File အားလုံးကို ကြည့်လို့ရတဲ့ Software...
ww.passmark.com/products/keytest.htm Keyboard ကိုစစ်တဲ့ Software...
ww.passmark.com/products/pt.htm Performance ကိုစစ်တဲ့ Software....
ww.passmark.com/products/bit.htm PC ကို BurnIn စစ်တဲ့ Software...
ww.testlog.com/ Program တွေကို Test Plan လုပ်ပြီးစစ်ပေးတဲ- Software....
ww.passmark.com/products/wirelessmonitor.htm Wireless WiFi လုပ်ပေးတဲ့ Software...
ww.passmark.com/products/batmon.htm UPS & laptop computer battery တွေကို စစ်ပေးတဲ့ Software...
ww.passmark.com/products/monitortest.htm Monitor မှ CRT & LCD မျက်နှာပြင် ပုံရိပ်တွေကို စစ်ပေးတဲ့ Software..
ww.passmark.com/products/modemtst.htm Modem ကောင်း ၊ မကောင်းစစ်ပေးတဲ့ Software...
ww.passmark.com/products/soundcheck.htm Sound Card ကိုစစ်ပေးတဲ့ Software...
ww.passmark.com/products/oscheck.htm Operation System ကိုစစ်ပေးတဲ့ Software...
http://myanmaritpros.com/profiles/blog/show?id.... ISA Server .ကိုမြန်မာလို လေ့လာဖို့.....(၁)
http://download.cnet.com/Active-SMART/3000-208.... Active SMART Software လိုချင်ရင်..
ww.brothersoft.com/google-talk-shell-70998.html Gtalk Shell လုပ်ဖို့ Software....(၁)
ww.softpedia.com/progDownload/google-talk-shell-Do- - wnload-71248... Gtalk Shell လုပ်ဖို့ Software....(၂)
လုပ်ပုံ လုပ်နည်းကို Blog နံပါတ် 92 မှာ ရေးထားပါတယ်..။လေ့လ- -ာကြည့်ပါ...။လုပ်ထာ- သင့်ပါတယ်..။
ww.malwaresweeper.com/ malware တွေကို သတ်တဲ့ Software...
ww.mediafire.com/download.php?ym02owyxyxb Malware sweeper ဒေါင်းလို့ မရဘူးဆိုလို့...
ww.mediafire.com/download.php?mw20ofgdmll Memory Strick ထဲကဟာတွေကို ဖွတ်ပေးတဲ့ ဆော့ဝဲလ်....
ww.freepdfconvert.com/ pdf ဖိုင်တွေပြောင်းတ-့  ဆောဝဲလ်......
http://onlinepyadaik.com အွန်လိုင်းပြတိုက- လေး
http://onlinepyadaik.com (ရသစုံအွန်လိုင်ြး-- တိုက်)
ww.ning.com Ning ၀က်ဆိုဒ်ပြုလုပ်န-်း
တရုတ်နိုင်ငံသားတ�- �ု့၏ လူသားချင်း စာနာစိတ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းထုတ်စရာ အခြေအနေမျိုးသည် တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွားလာနေပြီ�- �စ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် လပိုင်းက (၂)နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ် တစ်ဦးကို ကားနှစ်စင်းက ဖြတ်ကြိတ်သွားပြီ�- � ထွက်ပြေးခဲ့သလို လမ်းသွားလမ်းလာမျ�- �းကလည်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဒဏ်ရာရနေသည့် ကလေးမလေးကို မိမိတို့နှင့် မဆိုင်သလို ဖြတ်ကျော်သွားကြသ�- �ဖင့် အင်တာနက်တွင် အုတ်အော်သောင်းနင�- �း ဝေဖန်မှုများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
လစ်ဗျား သူပုန်များက ၎င်းအား ဖမ်းဆီးရမိချိန်တ�- �င် အာဏာရှင် ဗိုလ်မှူးကြီး ကဒါဖီသည် မိမိအား မသတ်ပါရန် တတွတ်တွတ် တောင်းပန်နေခဲ့သည�- �။ အောက်တိုဘာ (၂၀)ရက်နေ့က အာဖရိကတိုက်ရှိ ကြွယ်ဝသော နိုင်ငံမှ စစ်အာဏာရှင်ကြီးသ�- �် ၎င်းအား မုန်းတီးစက်ဆုပ်ေ�- �သည့် တော်လှန်ရေး ပြည်သူ့စစ်များ လက်ထဲတွင် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ�- �ည်။ လစ်ဗျားကို (၄၂)နှစ်လုံးလုံး တစ်ချက်လွှတ် အမိန့် အာဏာစက်ဖြင့် အုပ်စိုးခဲ့သော ကဒါဖီသည် လမ်းဘေးရှိ ကွန်ကရစ် ရေနှုတ်မြောင်း တစ်ခုတွင် ဒဏ်ရာ ဗရပွဖြင့် ဇာတ်သိမ်းခဲ့ရခြင�- �းဖြစ်သည်။
(လစ်ဗျားအာဏာရှင်က�- ��ါဖီ၏ အဆုံးသတ်အဖြစ်အပျ�- �်သရုပ်ဖော်)
လစ်ဗျား တော်လှန်ရေး တပ်များက ကဒါဖီ၏ မွေးရပ်မြို့ ဆာတီတွင် မိမိတို့၏ ရန်သူတော်ကို သုတ်သင်လိုက်ပြီဟ�- � သတင်းများ ထုတ်ပြန် ဖော်ပြခဲ့သော်လည်�- � နိုင်ငံတကာ အစိုးရများက ချက်ချင်း အတည်ပြုရန် ခက်ခဲနေခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင်မ�- � မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း�- �ှင့် ရိုက်ယူထားသော ဗီဒီယို မှတ်တမ်းများ၊ ဓာတ်ပုံများက ကဒါဖီတစ်ယောက် အသက်(၆၉)နှစ် အရွယ်တွင် လူ့လောကကြီးကို မျက်ကွယ်ပြုသွာြး�- �ီ ဆိုခြင်းအား အတည်ပြုနိုင်ခဲ့သ�- �်။
(ကဒါဖီ ဝင်ရောက်ပုန်းအော�- �်းခဲ့သည့် ကွန်ကရစ်ရေပိုက်လ�- �ိင်းအား ပြသနေစဉ်)
တစ်နိုင်ငံလုံးမှ မြို့ကြီးများကို တစ်ခုချင်းစီ သိမ်းယူလာသော တော်လှန်ရေး အင်အားစုများသည် ကဒါဖီ သစ္စာတော်ခံတို့၏ နောက်ဆုံး အခိုင်အမာ ခံတပ်ဖြစ်သော ဆာတီတွင် အာဏာရှင် စစ်ခေါင်းဆောင်ကြ�- �း ခိုအောင်းနေမည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ဆာတီမြို့သိမ်း စစ်ပွဲကို အင်နှင့်အားနှင့် ထိုးစစ်ဆင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာ (၂၀)ရက်နေ့တွင်မူ ဆာတီကို မဟာမိတ် လေတပ်များက အကူအညီ ပေးနေသည့် တော်လှန်ရေး အင်အားစုများက အရှိန်အဟုန်မြှင်�- � တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်�- � အခြေမလှတော့သည်ကိ�- � နားလည်ခံစားမိလာသ�- �့် ကဒါဖီသည် ၎င်း၏ သစ္စာတော်ခံ တပ်ဖွဲ့များနှင့်�- �တူ ဆာတီမှ ထွက်ပြေးခဲ့သည်။
(လစ်ဗျားအာဏာရှင်က�- ��ါဖီ၏ ရုပ်အလောင်း)
ကဒါဖီသည် နောက်လိုက်နောက်ပ�- � တပ်သားများကို ခေါ်ဆောင်ကာ ယာဉ်တန်းတစ်ခုဖြင�- �့ ကိုယ်လွတ်ရုန်းခဲ�- �ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ကောင်းကင်တွင် ပျံဝဲနေသည့် ဗြိတိသျှ တော်ဝင်လေတပ်မှ တော်နေးဒိုး ဂျက်တိုက်လေယာဉ် တစ်စင်းက အဆိုပါ ယာဉ်တန်းကို တွေ့ရှိသွားသည်။ တော်နေဒိုး လေယာဉ်ထံမှ အကြောင်းကြားမှုကိ�- � အတည်ပြု လက်ခံရရှိပြီးနော�- �် အမေရိကန် လေတပ်၏ မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ်က ယာဉ်တန်းကို ဒုံးကျည်ဖြင့် ပစ်ခတ်ကာ တားဆီးခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ပြင်သစ် လေတပ်မှ ရာဖေးလ် တိုက်လေယာဉ် တစ်စင်းကလည်း တိုက်ပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး လက်နက်များ တင်ဆောင်လာသည့် ပစ်ကပ်ကား (၁၅)စင်းပါ ယာဉ်တန်းကို ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကဒါဖီ၏ သစ္စာတော်ခံအချို့ သေဆုံးခဲ့သလို ကဒါဖီ အပါအ၀င် အချို့က လမ်းဘေးရှိ ကွန်ကရစ် ရေနှုတ်မြောင်းသို�- � ဆင်းကာ အကာအကွယ်ယူထားရသည�- �။
ထိုအချိန်တွင် ဆာတီ၏ နောက်ဆုံးလက်ကျန် ဧရိယာကို သိမ်းပိုက်ပြီးနေ�- �က် တစ်အိမ်တက်ဆင်း ကဒါဖီကို လိုက်ရှာနေသည့် လစ်ဗျား တော်လှန်ရေး တပ်များက ယင်းနေရာသို့ ဆိုက်ရောက်လာပြီး ကဒါဖီနှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များကိ�- � တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်�- �
(ကဒါဖီ၏ ကိုယ်ရံတော်အမျို�- �သမီးအချို့)
နောက်ဆုံးတွင် တစ်ဖက်သတ် တိုက်ပွဲမှာ ပြီးဆုံးသွားခြဲ့�- �ီး ကဒါဖီ၏ လက်ပါးစေ အားလုံး ရေနှုတ်မြောင်းအနီ�- �တွင်ပင် သေဆုံးခဲ့ကာ အာဏာရှင် ဗိုလ်မှူးကြီးမှာ တော်လှန်ရေး တပ်များ၏ လက်ရ ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။ ထို့နောက် ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ ဖြစ်နေသော လူအုပ်ကြီးက ကဒါဖီကို ၀ိုင်းဝန်း ကန်ကျောက်၊ ထိုးနှက်ခဲ့ကြသည်�- � ကဒါဖီသည် ထိုအချိန်က လက်ထဲတွင် ရွှေချထားသည့် ပစ္စတို သေနတ် တစ်လက်ကို ကိုင်ထားခဲ့သည်။
(တစ်ချိန်က လစ်ဗျားနိုင်ငံတွ�- �် အာဏာရှင်အဖြစ် အုပ်စိုးခဲ့သည့် ကဒါဖီ)
၎င်းသည် မိမိအား မပစ်ပါရန် တတွတ်တွတ် တောင်းပန်ခဲ့သော်�- �ည်း ဦးခေါင်းနှင့် ၀မ်းဗိုက်တို့တွင�- � အပစ်ခံရပြီး အသက်ထွက်သွားခဲ့သ�- �်။ ကဒါဖီ၏ သားတစ်ဦးဖြစ်သော မူတက်ဆင်မ်သည်လည်�- � ဆာတီ၏ နောက်ဆုံးတိုက်ပွ�- �တွင် သေဆုံးသွားကြောင်�- � သိရသည်။
တော်လှန်ရေး တပ်ဖွဲ့များသည် ကဒါဖီ၏ ရုပ်အလောင်းကို ဆေးရုံကား တစ်စင်းပေါ် တင်ပြီး မစ်ရာတာမြို့သို့ သယ်ဆောင်သွားသည်။ ကဒါဖီ သေဆုံးကြောင်း သတင်းကို ကြားရသည့်အခါ တော်လှန်ရေး တပ်ဖွဲ့များသည် လက်နက်ကြီးဒဏ်ကြေ�- �င့် ဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက်ဖြ�- �်ကာ ပျက်စီးနေသည့် မြို့ပျက်ထဲတွင် ၀မ်းသာအားရ အောင်ပွဲခံခဲ့ကြသ�- �်။
(ကဒါဖီနှင့် ခုနှစ်သက္ကရာဇ်မျာ�- �)
သတင်းဌာနများက ကဒါဖီနှင့် နောက်ဆုံးလက်ကျန် သစ္စာတော်ခံ တပ်သားများ သေဆုံးခဲ့သည့် ကွန်ကရစ် ပိုက်လိုင်းနေရာတ�- �င် ၀မ်းသာအားရဖြင့် အမှတ်တရ လာရေးသွားကြသည့် Graffiti စာတန်းများ၏ ပုံကိုလည်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ သတင်းများအရ ဒဏ်ရာဗလပွနှင့် ကဒါဖီ့ ရုပ်အလောင်းသည် ယခုအခါ မစ်ရာတာတွင် ရှိနေကြောင်း သိရှိရသည်။
လစ်ဗျား တော်လှန်ရေး တပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးက ၎င်းသည် အာဏာရှင် ခေါင်းဆောင်ကြီး မူအမ်မာ ကဒါဖီကို သတ်ပစ်ခဲ့ကြောင်း ဖွင့်ဟ ပြောကြားလိုက်သည်�- � အမည်ဖော်မပြသော အဆိုပါ တော်လှန်ရေး သမားက ဗိုလ်မှူးကြီး ကဒါဖီ၏ ခေါင်းနှင့် ဝမ်းဗိုက်ထဲသို့ ကျည်တစ်တောင့်စီ ပစ်သွင်းခဲ့သူမှာ မိမိပင်ဖြစ်ကြောင�- �း ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလာခြင်းဖြ�- �်သည်။ ငယ်ရွယ်ဟန်ရှိသော အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်၏ ဓာတ်ပုံကို သတင်းများက ဖော်ပြခဲ့သော်လည်�- � ၎င်း၏ အမည်နှင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက�- �များကို တိတိကျကျ မသိရသေးပေ။
(ကဒါဖီ၊ ၄င်း၏သားဖြစ်သူနှ�- �့် ကဒါဖီ၏ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး�- �ဟာင်းတို့၏ ရုပ်အလောင်းများအ�- �း ထားရှိရာ အအေးခန်း)
ဗီဒီယိုတစ်ခုတွင် ရိုက်ကူးထားမှုအတွ�- �်း ထိုသူက “ကျွန်တော်တို့ ကဒါဖီကို ဆွဲခေါ်လာတယ်။ သူ့မျက်နှာကို ကျွန်တော် ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ တခြားတော်လှန်ရေး�- �မားတွေက သူ့ကို ဆွဲထုတ်သွားဖို့ လုပ်နေတုန်း ကျွန်တော် နှစ်ချက်ဆင့် ပစ်ထည့်လိုက်တယ်။ ခေါင်းမှာတစ်ချက်�- � ဗိုက်မှာတစ်ချက်ပ�- �”ဟု ပြောကြားထားသည်။ ၎င်းက ကဒါဖီ၏ သွေးစွန်းနေသော အင်္ကျီမှ စုတ်ယူလာသည့် အ၀တ်စတစ်ခုနှင့် ကဒါဖီလက်မှ ချွတ်ယူလာသည်ဆိုေ�- �ာ ရွှေလက်စွပ် တစ်ကွင်းတို့ကိုလ�- �်း ပြသခဲ့သေးသည်။
(ကဒါဖီအား ပစ်သတ်ခဲ့သည်ဆိုသ�- �က ၄င်းဖြုတ်ယူလာခဲ့�- �သာ ကဒါဖီ၏လက်စွပ်ကို ပြသစဉ်)
ကဒါဖီသည် ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က ဆာတီမြို့သိမ်း တိုက်ပွဲတွင် ဆုတ်ခွာလာချိန်တွ�- �် မဟာမိတ် လေတပ်များ၏ ကြားဖြတ် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လစ်ဗျားသူပုန်မျာ�- �လက်သို့ ကျရောက်ခဲ့ခြင်ြး�- �စ်သည်။ ကဒါဖီကို မည်သူ ပစ်သတ်ခဲ့သည်ဆိုေ�- �ာ မေးခွန်းသည် လူအများကြား စိတ်ဝင်စားစရာ တစ်ခု ဖြစ်လာချိန်တွင် ထိုလစ်ဗျား သူပုန်က ယခုကဲ့သို့ ထုတ်ဖော် ၀န်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ�- �သည်။ သတင်းဌာနများကမူ ၎င်း၏ ပြောဆိုမှုကို အတည်ပြုချက် မပေးနိုင်သေးကြော�- �်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
လစ်ဗျားကို (၄၂)နှစ်လုံးလုံး ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်�- �ဲ့သော အာဏာရှင်ကြီးသည် အသက်(၆၉)နှစ်အရွယ်တ-ွင် တော်လှန်ပုန်ကန်သ�- �များလက်အတွင်း ဆိုးဆိုးရွားရွား အဖြစ်နှင့် သေကြေခဲ့ရပြီးနော�- �် ၎င်း၏ အလောင်းကို မစ်ရာတာရှိ အသားသိုလှောင်ရာ အအေးခန်းတစ်ခုအတွ�- �်း လူအများမြင်သာအော�- �် ပြသထားခြင်းပါ ခံခဲ့ရသည်။ ယခုအခါ လစ်ဗျားအာဏာရှင် ကါဒဖီ၏ ရုပ်အလောင်းအား အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက် နံနက်အစောပိုင်းတ�- �င် သဲကန္တာရအတွင်း အတိအကျ မသိရှိရသော လျှို့ဝှက်နေရာတွ�- �် မြှုပ်နှံလိုက်ပြ�- �ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဟောင်ကောင်မှာ အခြေစိုက်နေထိုင်�- �ဲ့ မလေးရှားရုပ်ရှင်�- �င်းသမီး မီရှဲလ်ယိုးဟာ ၁၉၉၀ နှစ်ကစလို့ အာရှရုပ်ရှင်လောက�- �ှာ နာမည်ကြီးလာခဲ့တဲ�- � မင်းသမီးတစ်လက်ဖြ�- �်ပါတယ်။ မစ္စယိုးဟာ ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှ�- �်လောကမှာ ၁၉၈၅ က Yes, Madam ဇာတ်ကားနဲ့ ပွဲထွက်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၇ တုန်းကလည်း ဂျိမ်းစ်ဘွန်းရုပ�- �ရှင် Tomorrow Never Die မှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနောက် သူမဟာ မြန်မာပရိသတ်များ အသိများကြတဲ့ Crouching Tiger, Hidden Dragon ဇာတ်ကား၊ တရုတ်မင...်းသမီး ကျန်းဇီယီနဲ့အတူ သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Memories ofaGeisha ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်ခဲ့သလို ဘရန်ဒင်ဖရေဇာ၊ ဂျက်လီတို့နဲ့အတူ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ မှာ Reign of Assassins တို့မှာလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ မီရှဲလ်ယိုးဟာ ၂၀၁၀ နှစ်စမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြ�- �်အကြောင်း ရိုက်ကူးမယ့် အတ္ထုပ္ပတ္တိရုပ်ရှင�- � The Lady ဇာတ်ကားမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြ�- �်နေရာက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖ�- �ိ့ အကြောင်းဖန်လာခဲ့�- �ါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒေါ်စုနေရာ သရုပ်ဆောင်ဖို့ ဝိတ်လျှော့ခဲ့ပြီ�- � ပြင်ဆင်မှုတွေ အများကြီးလုပ်ခဲ့�- �တယ်လို့ မီရှဲလ်ယိုးက နယူးဝိခ်မဂ္ဂဇင်းက�- �ိ ပြောခဲ့ပါတယ်။
The Lady ရုပ်ရှင်အချက်အလက�- � အချို့
ဒါရိုက်တာ - လက်ဘင်ဆင် Luc Besson
ဇာတ်လမ်း/ဇာတ်ညွှန်�- �� - ရီဘက်ကာဖရင်း
သရုပ်ဆောင်များ - မီရှဲလ်ယိုး (အောင်ဆန်းစုကြည်)၊- ဒေးဗစ်သယူးလစ်(မို�- ��်ကယ်အဲရစ်)၊ ဂျိုနသန်ရတ်ဂတ် (ကင်မ်အဲရစ်)၊ ဂျိုနသန်ဝုဒ်ဟောက�- �စ် (အလက်ဇန္ဒားအဲရစ်)
ဖြန့်ချိရေး - Europa Corp (ပြင်သစ်)၊ Entertaiment Film Distributors
UK, Conhen Media Group (US)
ဖြန့်ချိမည့်နေ့ - ၃၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၁
ဇာတ်ကားအမျိုးအစာ�- � - ဒရာမာ၊ ရိုးမန့်စ်၊ အတ္တုပ္ပတ္တိရုပ်ရှ�- �်
မှတ်ချက်။ ဤဇာတ်ကားကို ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ ၁၂ တွင် (၃၆) ကြိမ်မြောက် တိုရွန်တို နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်၌ အထူးပွဲပြသခဲ့ပြီ�- � ဖြစ်သည်။
free software downloads link